CAN 2019: kooxaha waa la yaqaan - WARGELINAYSO
ACCUEIL » SPORTS »XIDHIIDHI: kooxaha waa la yaqaan
CAN 2019: kooxaha waa la yaqaan
Waxaan hadda ognahay lixda kooxood ee ka kooban qaybta ugu dambaysa ee CAN 2019.
Waxay ku taallay bogga Giza, ee lugta of Pyramids iyo Sphynx, in munaasabadda aan dhamaadka lahayn ee isku aadka 2019 African Nations Cup lagu qabtay. Munaasabadda sababtoo ah waxay qaadatay in ka badan saacad iyo badh waxyaabo ay ugu dambayntii noqdaan kuwo xiiso leh, taas oo ah inaan sheegno inaan tagno barbaraha.
Dalka martida loo yahay waa inuu xoqo Congo, inUganda iyo Zimbabwe halka kooxda B, labada carruur ee cusub, Madagascar et Burundi, waxay ogaan doontaa wejiga ugu dambeeya ee wadajirka ah ee wadaagga ah isla markaana ay tahay inay la dagaalamaan Guinea iyo Nigeria. Isku darka isku dhafka ah Tansaaniya kuwaas oo ku qasbanaan doona inay xoqdo deriska Kenya laakiin gaar ahaan labada ciyaaryahan Senegal - Algeria, halka kooxda D ay noqon doonaan "dhimasho" oo leh seddex qof Morocco-Ivory Coast-Africa du Sud, ka Morocco isaga oo raadinaya habdhaqankii dhibbanaha ee Ruushka 2018, Côte d'Ivoire, Oo Namibia. Tunisia et Mali wuxuu wajihi doonaa bilowga seddexaad, Mauritania iyoAngola Ugu dambeyntiina, tartanka soo socda, ayaa ah Cameroon wuxuu ka gudbi doonaa birta Ghana, ka Benin iyo Guinea-Bissau. Ugu dambeyntii, ogow in dhammaan arrimahan aysan tixgelineynin racfaanka ay soo gudbiyeen Comoros oo go'aankooda la siin doono "dhakhso".
Xusuusnow, 2019 21 lagu qaban KARAA ka June in July 19 ee Masar oo ay noqon doontaa ma aha oo kaliya ugu horeeyay ee ku doodaya in afar iyo labaatan, laakiin sidoo kale ugu horeysay ee lagu qaban doono xagaaga. Ciyaartii furitaanka ayaa ka soo hor jeedaa doonaaMasar au Zimbabwe.
Abuuraha iyo Editor-in-Chief of Opperee.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://lucarne-opposee.fr/index.php/actualite/express/6757-can-2019-les-groupes-sont-connus
Youtube: WACS. Nantes-Lyon: Halkaan ka daawo haweenka ciyaartoyda labada kooxood sawirada
OL: Warbaahinta saxda ah ee Jean-Mchel Aulas (Janaayo 2009) - VIDEO
Brazil: Xvideos ama Xnxxu wuxuu noqonayaa barnaamij loogu talagalay jilidda filimada iyo taxanaha.
Ka ilaali dabka weyn ee iftiinka cirka ku ah xeebta bariga - BGR
Keydso 10 $ "Echo Point for Cars" Qof kasta wuxuu jecel yahay - BGR